ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုမှ လျော့ကျအောင် တည်ဆောက်ခြင်း
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရွာသားတွေဟာ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတွေ ကျလာပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ အိမ်တွေအောက်မှာ အချင်းချင်း တိုးဝှေ့ပူးကပ်နေကြပါတယ်။ တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ကြာရှည်ရှင်သန်ဖို့က သံအမိုးပြားတွေထက် သူတို့ပိုပြီး လိုအပ်နေတာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုဟာ အစားအစာ၊ အသက်မွေးမှု၊ စပါးခင်းတွေနဲ့ အိမ်တွေရဲ့ လုံခြံမှုအပြင် ရေချိုရရှိဖို့အတွက် တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တဲ့ ရေကာတာတွေနဲ့ ရေလွှတ်ပေါက်တွေအပေါ် အားကိုးနေရပါတယ်။
BY Jennifer Macintyre
Photo Essays, Interview, Features
Aung La Nsang: ‘Winning gives you confidence, but losing gives you character’
Afterathrashing at the hands of Vitaly Bigdash in January, Myanmar’s MMA hero hasashot at redemption in what may be his last chance to become middleweight champion.
Building to mitigate climate change
Rakhine State villagers in cyclone-prone areas need robust embankments and sluices to protect their food security, homes and access to fresh water.
Photo Essays, Affairs, Culture
At Myanmar's National Museum, bridging the past and future
A small, dedicated team is doing its best to transform the country’s museums into active, living repositories of history and culture but it faces many challenges, includingaponderous bureaucracy.
Journalists arrested in Shan State to face unlawful association charges
Photo Essays, Affairs, Features, Culture
At Myanmar’s National Museum, bridging the past and future
A small, dedicated team is doing its best to transform the country’s museums living repositories of history, but it faces many challenges fromaponderous bureaucracy.
The fifth Human Rights Human Dignity International Film Festival was an insight into how far the country has progressed in its political transition.
BY Sing Lee